ရာသီသစ်မှာ မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ကြယ်ပွင့်များ
လာမယ့်ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကစားသမားများ
6 Aug 2018 . 3:20 PM
ဥရောပဘောလုံးရပ်ဝန်းရဲ့ နာမည်ကျော် အမှတ်ပေးလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေ ပြန်လည်စတင်တော့မယ့်အချိန်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ပြန်လည်စတင်တိုင်း စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နေဆဲပဲ။ နာမည်ကျော် ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေနဲ့အတူ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ဆဲပါပဲ။ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ ကစားခဲ့သလို နာမည်ကျော် Daily Mail ရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူဟောင်း Jamie Redknapp က လာမယ့်ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းစောင့်ကြည့်ရမယ့် ကစားသမားတွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားတယ်။ Jamie Redknapp ရဲ့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကစားသမားစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ကစားသမားတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နာဘီကီတာ Naby Keita (လီဗာပူးလ်) – အသက် (၂၆)နှစ်
ကွင်းလယ်မှာ နေရာစုံ ကစားနိုင်ပြီး ခွန်အားကို အစွမ်းကုန်အသုံးချတက်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး။ ကောင်းမွန်တဲ့ ထိချက်တွေကနေ သွင်းဂိုးတွေ ဖန်တီးနိုင်သလို၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဂိုးသွင်းယူနိုင်သူပါ။ ခွန်အားအသုံးပြုတဲ့ ကစားပုံကြောင့်ပဲ မကြာခဏပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်မိပြီး အနီကတ်ပြသခံရတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆို လီဗာပူးလ်အတွက် တော်တော်အသုံးဝင်မယ့် ကစားသမားတစ်ဦး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက လိုက်ပ်ဇစ်မှာ အနီကတ် (၄)ကြိမ်အထိ ပြခံခဲ့ရတာက မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ရဲ့ လီဗာပူးလ်ကွင်းလယ်မှာ ကစားသမားသစ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖာဘင်ဟို Fabinho နဲ့အတူ စောင့်ကြည့်သွားရမယ့် ကစားသမားတစ်ဦးပါ။
မက်စ်မေယာ Max Meyer (ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်) – အသက် (၂၂)နှစ်
ရှော်လ်ကေးအသင်းရဲ့ ဂျာမန်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အတွက် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ဘောလုံးကို သေသေသပ်သပ် ကစားနိုင်တဲ့ စွယ်စုံရ ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ ပဲလေ့စ်အသင်းကို ဒီလိုကစားသမားမျိုးရောက်လာချိန်မှာ ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်။ နည်းပြ ဟော့ဒ်ဆန် Hodgson ဘယ်နေရာမှာ ထားကစားမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ကွင်းလယ် (၂)ယောက်တန်းမှာပဲ ကစားခိုင်းမလား၊ No.(10)Role နေရာမှာပဲ ကစားခိုင်းမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရမယ်။ မေယာ Meyer ကို အံကိုက်နေရာချထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အသင်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် ကစားသမားဖြစ်ပြီး စောင့်ကြည့်သွားရမယ့် ကစားသမားပါပဲ။
ယော်ဂျင်ဟို Jorginho (ချယ်လ်ဆီး) – အသက် (၂၆)နှစ်
နည်းပြသစ် ဆာရီ Sarri ရဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားခေါ်ယူမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး နာပိုလီအသင်းမှာ လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေဖြစ်တာကြောင့် စောင့်ကြည့်ချင်စရာကောင်းနေတယ်။ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho အတွက် ပေးချေခဲ့ရတဲ့ ပေါင် (၅၇)သန်း ပမာဏက များတယ်လို့ ထင် ရပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်မှာ ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် ကစားသမားတစ်ဦးလို့ ဆာရီ Sarri ကိုယ်တိုင်က အပြည့်အဝယုံကြည်နေတယ်။ အသင်းဖော်တွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို ကွင်းလယ်ကနေ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် မန်စီတီးအသင်းနဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲစဉ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းအရတော့ အသင်းသစ်မှာ တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။
ရစ်ချာလီဆန် Richarlison (ဝက်ဖို့ဒ်) – အသက် (၂၁)နှစ်
ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းမှာ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo လို ကစားသမားမျိုးလို့ မြင်တယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် (၅)ကြိမ် ရထားတဲ့ ခရစ္စတီယာနို Cristiano နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မန်ယူကို ရောက်ခါစ ငယ်ရွယ်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို Cristiano လို ကစားသမားမျိုးပါ။ အရှိန်အဟုတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကစားတက်တဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ။ အမြင့်ဘောအားသန်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်သလို အသင်းဖော်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားပါ။ အဲဗာတန်နည်းပြသစ် မာကိုဆေးလ်ဗား Marco Silva က အသင်းဟောင်းမှာ လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ တပည့်ဟောင်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် (၄၄)သန်းအထိ အသုံးပြုပြီး ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ သူ့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးက များပြားတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အလားအလာရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို စောင့်ကြည့်ရမယ်။ သူ့ကို ခေါ်ယူခဲ့တာ မှန်ကန်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင် ခြေစွမ်းနဲ့ သက်သေပြရမယ့် ကစားသမားပါ။
ရူဘင်နီးဗတ်စ် Ruben Neves (ဝုလ်ဗ်) – အသက် (၂၁)နှစ်
နီးဗတ်စ် Neves ဟာ အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တယ်။ အသင်းကို တန်းတက်အောင် အဓိကနေရာက စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ စွမ်းဆောင်ပြမယ့် ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့ ရှိတယ်။ အသင်းကွင်းလယ်မှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သလို အသင်းဖော်တွေ နေရာလွတ်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖြစ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဧရိယာပြင်ပကနေ (၆)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပြီး လှပသေသပ်တဲ့ အဝေးကန်ချက်တွေကနေ ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ကစားသမားဆိုတာ ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီခြေစွမ်းတွေကို ဆက်ထိန်းနိုင်ခဲ့ရင် နောက်ရာသီမှာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။
ဖိုဒန် Foden (မန်စီးတီး) – အသက် (၁၈)နှစ်
အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့ အနာဂတ်ကစားသမားဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို တစ်နေ့မှာ ဦးဆောင်နိုင်မယ့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ကိုယ်တိုင်က သူ့လက်အောက်မှာ တိုးတက်လာမယ့် ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရလို့ အငှားမချဘဲ အသင်းမှာ အသုံးပြုသွားဖို့ စီစဉ်တဲ့အထိ ခြေစွမ်းပိုင်းက အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေခဲ့တယ်။ ဇာဗီ Xavi ၊ အင်နီယေစတာ Iniesta တို့လို ကစားသမားဖြစ်လာမယ့် မျိုးဆက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva ၊ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne တို့နဲ့သာ တွဲဖက်ကစားရမယ်ဆိုရင် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရှာဖွေနိုင်မယ့် ကစားသမားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မဟုတ်ရင်တောင် FA ဖလားနဲ့ လိဂ်ဖလားက ဖိုဒင် Foden အတွက် အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။
ဆီဆက်ဂနွန် Sessegnon (ဖူလ်ဟမ်) – အသက် (၁၈)နှစ်
အသက် (၁၈)နှစ်အရွယ် ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ မလိုက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ဒီကစားသမားမှာရှိတယ်။ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းအတွက် (၇၁)ပွဲ ကစားပေးခဲ့ပြီး ဂိုး (၂၀)သွင်းယူပေးခဲ့တယ်။ PFA လူငယ်အကောင်းဆုံးဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ နောက်ခံအစွန်နေရာမှာဆို အက်ရ်ှလေကိုးလ် Ashley Cole ၊ တောင်ပံတိုက်စစ်နေရာမှာဆို ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale လို ဖြစ်လာမယ့် ကစားသမားပါ။ နည်းပြ ယိုကာနိုဗစ် Jokanovic သာ အရောင်တင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် ပထမတန်းစား ဖြစ်လာမယ့် ကစားသမားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက ဆီဆက်ဂနွန် Sessegnon ကို ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်နိုင်ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပထမတန်းစားကစားသမားဆိုတဲ့ အဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Goal.com, CPFC, 234Radio, STLR MEDIA, Wolves, Twitter, PL
လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲမှာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ကစားသမားမြား
ဥရောပဘောလုံးရပျဝနျးရဲ့ နာမညျကြျော အမှတျပေးလိဂျပွိုငျပှဲတှေ ပွနျလညျစတငျတော့မယျ့အခြိနျကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ တဈနှဈတဈနှဈ ပွနျလညျစတငျတိုငျး စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးတှနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲက ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျနဆေဲပဲ။ နာမညျကြျော ကစားသမား ချေါယူမှုတှနေဲ့အတူ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုကို ပေးစှမျးနိုငျဆဲပါပဲ။ လီဗာပူးလျအသငျးမှာ ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောကွာ ကစားခဲ့သလို နာမညျကြျော Daily Mail ရဲ့ ပငျတိုငျဆောငျးပါးရှငျဖွဈတဲ့ အင်ျဂလနျကှငျးလယျလူဟောငျး Jamie Redknapp က လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ကစားသမားတှကေ ဘယျသူတှေ ဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဖျောပွထားတယျ။ Jamie Redknapp ရဲ့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ကစားသမားစာရငျးမှာ ပါဝငျလာတဲ့ ကစားသမားတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
နာဘီကီတာ Naby Keita (လီဗာပူးလျ) – အသကျ (၂၆)နှဈ
ကှငျးလယျမှာ နရောစုံ ကစားနိုငျပွီး ခှနျအားကို အစှမျးကုနျအသုံးခတြကျတဲ့ ကစားသမားတဈဦး။ ကောငျးမှနျတဲ့ ထိခကျြတှကေနေ သှငျးဂိုးတှေ ဖနျတီးနိုငျသလို၊ ကိုယျတိုငျလညျး ဂိုးသှငျးယူနိုငျသူပါ။ ခှနျအားအသုံးပွုတဲ့ ကစားပုံကွောငျ့ပဲ မကွာခဏပွဈဒဏျ ကြူးလှနျမိပွီး အနီကတျပွသခံရတာကို ထိနျးခြုပျနိုငျမယျဆို လီဗာပူးလျအတှကျ တျောတျောအသုံးဝငျမယျ့ ကစားသမားတဈဦး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက လိုကျပျဇဈမှာ အနီကတျ (၄)ကွိမျအထိ ပွခံခဲ့ရတာက မှတျတမျးဆိုးတဈခုဖွဈခဲ့တယျ။ နညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ရဲ့ လီဗာပူးလျကှငျးလယျမှာ ကစားသမားသဈ တဈဦးဖွဈတဲ့ ဖာဘငျဟို Fabinho နဲ့အတူ စောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။
မကျဈမယော Max Meyer (ခရစ်စတယျပဲလစျေ့) – အသကျ (၂၂)နှဈ
ရှျောလျကေးအသငျးရဲ့ ဂြာမနျကွယျပှငျ့ကစားသမားကို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့တာ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အတှကျ အကြိုးအမွတျတဈခုဖွဈလာဖို့ရှိတယျ။ အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ ဘောလုံးကို သသေသေပျသပျ ကစားနိုငျတဲ့ စှယျစုံရ ကှငျးလယျကစားသမားတဈဦးပါ။ ပဲလစျေ့အသငျးကို ဒီလိုကစားသမားမြိုးရောကျလာခြိနျမှာ ပွဿနာတဈခုတော့ရှိနတေယျ။ နညျးပွ ဟော့ဒျဆနျ Hodgson ဘယျနရောမှာ ထားကစားမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ကှငျးလယျ (၂)ယောကျတနျးမှာပဲ ကစားခိုငျးမလား၊ No.(10)Role နရောမှာပဲ ကစားခိုငျးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ။ မယော Meyer ကို အံကိုကျနရောခထြားနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အသငျးအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အကြိုးဖွဈထှနျးစမေယျ့ ကစားသမားဖွဈပွီး စောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ့ ကစားသမားပါပဲ။
ယျောဂငျြဟို Jorginho (ခယျြလျဆီး) – အသကျ (၂၆)နှဈ
နညျးပွသဈ ဆာရီ Sarri ရဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားချေါယူမှုဖွဈခဲ့ပွီး နာပိုလီအသငျးမှာ လကျတှဲခဲ့ဖူးတဲ့ သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာကောငျးနတေယျ။ ယျောဂငျြဟို Jorginho အတှကျ ပေးခခြေဲ့ရတဲ့ ပေါငျ (၅၇)သနျး ပမာဏက မြားတယျလို့ ထငျ ရပမေယျ့ ခယျြလျဆီးကှငျးလယျမှာ ထိပျတနျးစှမျးဆောငျနိုငျမယျ့ ကစားသမားတဈဦးလို့ ဆာရီ Sarri ကိုယျတိုငျက အပွညျ့အဝယုံကွညျနတေယျ။ အသငျးဖျောတှအေတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အထောကျအပံ့တှကေို ကှငျးလယျကနေ ဖနျတီးပေးနိုငျမယျ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပမေယျ့ မနျစီတီးအသငျးနဲ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျးပှဲစဉျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးအရတော့ အသငျးသဈမှာ တိုးတကျမှုနှေးကှေးနသေလိုဖွဈနတေယျ။
ရဈခြာလီဆနျ Richarlison (ဝကျဖို့ဒျ) – အသကျ (၂၁)နှဈ
ဝကျဖို့ဒျအသငျးမှာ သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေို မွငျတှခေဲ့ရတယျ။ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo လို ကစားသမားမြိုးလို့ မွငျတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ (၅)ကွိမျ ရထားတဲ့ ခရစ်စတီယာနို Cristiano နဲ့ တူတယျလို့ ပွောခငျြတာမဟုတျပါဘူး။ မနျယူကို ရောကျခါစ ငယျရှယျတဲ့ ခရစ်စတီယာနို Cristiano လို ကစားသမားမြိုးပါ။ အရှိနျအဟုတျပွငျးပွငျးနဲ့ ကစားတကျတဲ့ ကစားသမားမြိုးပါ။ အမွငျ့ဘောအားသနျတဲ့ ကစားသမားဖွဈသလို အသငျးဖျောတှနေဲ့ ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားပါ။ အဲဗာတနျနညျးပွသဈ မာကိုဆေးလျဗား Marco Silva က အသငျးဟောငျးမှာ လကျတှဲခဲ့ဖူးတဲ့ တပညျ့ဟောငျးအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ (၄၄)သနျးအထိ အသုံးပွုပွီး ချေါယူခဲ့တယျ။ သူ့အတှကျ အသုံးပွုခဲ့ရတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးက မြားပွားတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ အလားအလာရှိတဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈလို့ စှမျးဆောငျရညျတှကေို စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ သူ့ကို ချေါယူခဲ့တာ မှနျကနျကွောငျး သူကိုယျတိုငျ ခွစှေမျးနဲ့ သကျသပွေရမယျ့ ကစားသမားပါ။
ရူဘငျနီးဗတျဈ Ruben Neves (ဝုလျဗျ) – အသကျ (၂၁)နှဈ
နီးဗတျဈ Neves ဟာ အသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက စှမျးဆောငျပွခဲ့တယျ။ အသငျးကို တနျးတကျအောငျ အဓိကနရောက စှမျးဆောငျပေးခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ စှမျးဆောငျပွမယျ့ ပွိုငျပှဲဖွဈလာဖို့ ရှိတယျ။ အသငျးကှငျးလယျမှာ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျပေးနိုငျသလို အသငျးဖျောတှေ နရောလှတျရရှိအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖွဈတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဧရိယာပွငျပကနေ (၆)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့ပွီး လှပသသေပျတဲ့ အဝေးကနျခကျြတှကေနေ ဂိုးအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ ကစားသမားဆိုတာ ပွသနိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒီခွစှေမျးတှကေို ဆကျထိနျးနိုငျခဲ့ရငျ နောကျရာသီမှာ ကွီးမားတဲ့ အပွောငျးအရှတေ့ဈခုဖွဈလာဖို့ရှိတယျ။
ဖိုဒနျ Foden (မနျစီးတီး) – အသကျ (၁၈)နှဈ
အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကရဲ့ အနာဂတျကစားသမားဖွဈလာဖို့ရှိတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကို တဈနမှေ့ာ ဦးဆောငျနိုငျမယျ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈလာမယျလို့ ယုံကွညျတယျ။ နညျးပွ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ကိုယျတိုငျက သူ့လကျအောကျမှာ တိုးတကျလာမယျ့ ကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရလို့ အငှားမခဘြဲ အသငျးမှာ အသုံးပွုသှားဖို့ စီစဉျတဲ့အထိ ခွစှေမျးပိုငျးက အဆကျမပွတျ တိုးတကျနခေဲ့တယျ။ ဇာဗီ Xavi ၊ အငျနီယစေတာ Iniesta တို့လို ကစားသမားဖွဈလာမယျ့ မြိုးဆကျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတယျ။ ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva ၊ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne တို့နဲ့သာ တှဲဖကျကစားရမယျဆိုရငျ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှေ ရှာဖှနေိုငျမယျ့ ကစားသမားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မဟုတျရငျတောငျ FA ဖလားနဲ့ လိဂျဖလားက ဖိုဒငျ Foden အတှကျ အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေးဖွဈလာဖို့ရှိတယျ။
ဆီဆကျဂနှနျ Sessegnon (ဖူလျဟမျ) – အသကျ (၁၈)နှဈ
အသကျ (၁၈)နှဈအရှယျ ကစားသမားတဈဦးနဲ့ မလိုကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ဒီကစားသမားမှာရှိတယျ။ လိဂျခနျြပီယံရှဈပွိုငျပှဲမှာ အသငျးအတှကျ (၇၁)ပှဲ ကစားပေးခဲ့ပွီး ဂိုး (၂၀)သှငျးယူပေးခဲ့တယျ။ PFA လူငယျအကောငျးဆုံးဆုအတှကျ ဆနျခါတငျစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ နောကျခံအစှနျနရောမှာဆို အကျရျှလကေိုးလျ Ashley Cole ၊ တောငျပံတိုကျစဈနရောမှာဆို ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale လို ဖွဈလာမယျ့ ကစားသမားပါ။ နညျးပွ ယိုကာနိုဗဈ Jokanovic သာ အရောငျတငျပေးနိုငျမယျဆိုရငျ သခြောပေါကျ ပထမတနျးစား ဖွဈလာမယျ့ ကစားသမားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲက ဆီဆကျဂနှနျ Sessegnon ကို ဖိအားဒဏျခံနိုငျနိုငျရှိ၊ မရှိ စမျးသပျမယျ့ ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈပွီး ပထမတနျးစားကစားသမားဆိုတဲ့ အဆငျ့ကို တကျလှမျးဖို့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျပွရမှာဖွဈပါတယျ။